traintips Archives | စာမျက်နှာ4၏5| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ သက်သတ်လွတ်စားဘို့ဥရောပအကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများစာရင်းနောက်ဆုံးတော့ရှည်ရရှိရန်စတင်နေသည်. ဒါဟာသွားရဖို့အနည်းငယ်နှေးကွေးပါပြီစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သက်သတ်လွတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုနောက်ဆုံးတော့ချွတ်ယူနေသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အသားဗဟိုပြုဟင်းလျာများအများအပြားဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာ menus တွေလွှမ်းမိုးကြောင်းသိရ….
ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားတွင်နယ်လှည့်သည် Backpacking သိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်သွားလာရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. သင့်ရဲ့နောက်ကျောပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏ဥစ္စာရှိခြင်းနှင့်ရထားကနေရထားနဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းပြည်ဖွယ်ရှိနေသည်များ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အတွေ့အကြုံ. ဒီဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာသည်ကတည်းက, ကျွန်တော်တို့…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကိုယ့်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ, သငျသညျတောက်ပနှင့် sparkly နိုင်ငံအသစ်များများစွာသောလူရှာဖွေစူးစမ်းနိုင်ပါသည်. ဒါပေမဲ့, အဲဒီမှာရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ. ဥရောပတိုက်တွင်ဘတ်စ်ကားနှိုင်းယှဉ်မီးရထားခရီးသွားလာသည့်အခါ? This article was written to educate about Train Travel and was made…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကလေးတွေနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်, ရထားပေါ်တွင်လေးတွေနှင့်အတူစီးနင်းသွားလာရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တတ်နိုင်လမ်းနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျအမြိုးသားတို့နှင့်အတူခရီးထွက်ကြသောအခါဒါဟာအစဖြစ်ကောင်းအများဆုံးသက်သာနှင့်အနည်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုင်. ကျနော်တို့ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားနေပါစေအဘယ်အရာကိုစိတ်ညစ်စရာသိ…
ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်ခုခုပျစ်သီးအားဖြင့်ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ခဲ့ဖူး, ရထားနဲ့တူ? ဘယ်လိုမှတက်သွားလာအသံပါဘူး 300 တစ်နာရီကိုကီလိုမီတာ? ဥရောပသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာမှအလျင်အမြန်သင်ယူလိမ့်မည်ဟုမြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်. သာ high-speed ရထားန်ဆောင်မှု…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ...
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပ၌ရထားကြီးမားတဲ့အရာများမှာ; ငါတို့သည်ငါတို့၏သံလမ်းကိုချစ်, ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတခြားအမျိုးအစားကျော်သူတို့အားရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်. အပြင်လျင်မြန်အတွက်အမှတ် A ကနေအမှတ် B ကိုမှရတဲ့အနေဖြင့်, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုံးစံ, အများစုဤမျှလောက်ရှိမယ့်…